यी औषधीय गुणले भरिपूर्ण छ भगवान गणेशलाई चढाउने गरिएको दुबो, जान्नुहोस यसका फाइदा बारे - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»यी औषधीय गुणले भरिपूर्ण छ भगवान गणेशलाई चढाउने गरिएको दुबो, जान्नुहोस यसका फाइदा बारे
By मनिषा थापा on १ आश्विन २०७५, सोमबार ०८:१० धर्म/दर्शन
पिएनपिखबर : सामान्यतया हरेक खालको पुजा पाठ र हवनको समय दुवो प्रयोग गर्ने गरिन्छ। दुवो एक घाँस हो। दुबो हरेक भगवानलाई चडाउने गरिन्छ। भगवान गणेशलाई दुबोको घाँस नकै मनपर्छ। यसकारण विशेषरूपबाट श्रीगणेशलाई यो घाँस चढाईने गरिन्छ। दुवोलाई पवित्र मानिने गरिन्छ र रोगको उपचारमा औषधीको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। आउनु होस् जानौ दुबोको प्रयोग गर्दा के कस्ता फाइदा हुने गर्छ।
प्राचीन समयमा अनलासुरका एक दानव थियो। यस दानवबाट ऋषि-मुनि र आम मानिस भयभीत रहन्थे। किनभने यसले मानिस काँचो निल्ने गर्दथ्यो। दानवको यास प्रकोपबाट डराएर इंद्र देव सहित सबै देवताहरु आफ्नो प्राणको रक्षाको लागि गणेश भगवानसंग गुहार मागे। देवता र ऋषि-मुनिलाई बचाउनको लागि श्रीगणेशले अनलासुरलाई नै निले। तर श्रीगणेशलाई भने पेटमा जलन हुन थाल्यो। त्यसपछि दुबोलाइ २१ मुठो बनाएर कश्यप ऋषिले गणेशलाई औषधिको रूपमा दिएका थिए। यसबाट उनको पेटको दुखाई कम भएको थियो। त्यस बखत देखि तब से श्रीगणेशलाई दुबो चडाउने चलन शुरु भयो। दुबोको घास सेवन गर्नाले हुन्छन यस्ता फाइदा..
१. डायबिटीजको उपचार
दुबोमा में ग्लाइसेमिक गुण पाइन्छ र यसको अर्कबाट डायबिटीज रोगीलाई हाइपोग्लाइसेमिक प्रभावित हुने गर्छ र यस रोगबाट मुक्ति दिलाउँछ।
२. रगतको कमी हटाउँछ
दुबोलाई पिनेर पिउनाले शरीरमा रेड ब्लड सेल्सको संख्या बढ़छ र यसमा होमोमाग्लोबिन पनि बढ्छ। र रगतको कमी पनि हुदैन।
३. अनुहारमा निखार आउँछ।
यदि तपाईको छालामा चीलाई रहन्छ भने अनुहार दाग, धब्बा र फोका आउने गर्छ। त्यसलाई दुबोको पेस्ट बनाएर थोरै बेसार मिसाउनु होस् अनि छाला लाउनुहोस् यसले धेरै लाभ मिल्छ। आ
४. कब्जियत हट्छ
दुबोमा प्रोटिन, क्याल्सियम, पोटासियम सहित कयौ खालका खनिज तत्व पाइन्छ। यसकारण दुबो सेवन गर्नाले पेटमा कब्जियत हुदैन।
५. टाउँको दुख्ने समस्या हट्छ
दुबो र चुनाको समान मात्रामा लिएर पेस्टलाई निधारमा लगाउनुहोस। यसले टाउँको दुखाई कम गर्छ।